Imibono yangaphakathi: Izinketho ezi-3 zendlela yokusebenzisa i-ombre - Indlela yokuphila 2022
Imibono yangaphakathi: Izinketho ezi-3 zendlela yokusebenzisa i-ombre
Ukuguqulwa kombala kusuka kumnyama kuya ekukhanyeni, kusuka komunye umbala kuya komunye okubizwa ngokuthi i-ombre kuye kwathandwa kakhulu eminyakeni yamuva, kuhlanganise nangaphakathi.
Inqubo ye-ombre ekuqaleni yavela ku-cosmetology, lapho abakhiqizi abaziwayo bekhipha imigqa yokuqala yombala wezinwele ngomphumela we-ombre. Balandelwa abaklami bemfashini abaqala ukwakha izingubo zokushintsha umbala. Namuhla, ukuthambekela okufanayo kuyafaneleka nasekwakhiweni kwangaphakathi.
Lokhu mhlawumbe ukusetshenziswa okuphawuleka kakhulu komphumela we-ombre ngaphakathi, kepha ngasikhathi sinye futhi kunzima kakhulu kumasu wokwenza. Lapha awukwazi ukwenza ngaphandle kwesandla sochwepheshe senkosi, okufanele isebenze ngisho nemivimbo noma isebenzise isibhamu se-spray ukwenza ukuguqulwa kombala okuvumelanayo.
Sicela uqaphele ukuthi ngokwemithetho, ama-shades amnyama kufanele asetshenziswe engxenyeni engezansi yekamelo, nama-shades alula - engxenyeni engenhla. Ingane ukuthi lo mphumela udala umuzwa wesitezi esizinzile kanye nophahla oluphakeme.
Ubuchwepheshe obusha busetshenziswa ngempumelelo ezindwangu. Isibonelo, umphumela we-ombre ezindwangu ezifana nelineni, ukotini, usilika ubukeka umnandi - ubonakala untanta emoyeni. I-Ombre ivame ukuhlanganiswa ngempumelelo kakhulu nephethini noma iphethini.
Inqubo ye-ombre inhle ekusebenziseni ifenisha yefreyimu, lapho kukhona ama-sashes amaningi - avundlile noma aqondile.
Futhi into ethakazelisa kakhulu ukuthi wena ngokwakho ungayipenda.
Izipho zemvelo: indlela yokusebenzisa i-lavender ekunakekelweni komzimba nezinwele
I-lavender ayinhle nje kuphela kodwa futhi inezindawo ezizuzisayo. Sizokutshela ukuthi yiziphi izakhiwo ezizuzisayo ze-lavender, ukuzisebenzisa ekuphileni kwansuku zonke nasekunakekelweni komzimba nezinwele
Ukumomotheka okumhlophe qhwa - izinganekwane ezi-TOP-6 mayelana nokuba mhlophe kwamazinyo
Ingabe kufanele ube mhlophe amazinyo akho? Iqiniso nenganekwane mayelana nenqubo yokwenza amazinyo. Ingabe amazinyo amhlophe ayingozi koqweqwe lwawo? Udokotela omkhulu womtholampilo wamazinyo waphendula le mibuzo
Ihlobo elihle: indlela yokusebenzisa isikhathi esingcono kakhulu sonyaka ngenzuzo nenjabulo
Ehlobo, ufuna ukuba nesikhathi sakho konke ngesikhathi esisodwa, kodwa kuhlale kunengozi yokulahleka ngobuningi bezinhlelo. Sinikeza imibono eminingana ezosiza ukwenza ihlobo licebe futhi lithakazelise ukuze ekupheleni kuka-August ungabubuli ukuthi ihlobo selidlulile kuwe
Izifo ezi-5 ongakutshela ngazo ngephunga lomzimba
Ngokuvamile kwenzeka ukuthi uhlanzekile kakhulu, kodwa iphunga elimnandi lomjuluko nomzimba lisekhona. Lokhu kungase kubonise izifo ezihlukahlukene